Ammaahda ku jirta qalabyada iibka waxay noloshaadu fududaan kartaa?
Haddii aad leedahay waayo-aragnimo ah inaad iibiso badeecadaha Amazon, waa inaad ogaataa in ay tahay wakhti wakhti badan qaadata oo u baahan dadaal wax ku ool ah iyo horumar joogto ah. Ma awoodi kartid in aad maareyn kartid ganacsi kasta oo aad adigu leedahay, inta badan haddii aad isticmaasho Amazon sidii ilaha iibka ee dheeraadka ah. Nasiib wanaag, waxaad ka heli kartaa xirfado badan oo Amazon ah oo qalab wax ku iibin kara noloshaada. Iyadoo la adeegsanayo, waxaad awoodi doontaa inaad waqti dheeraad ah u qaadatid horumarka ganacsigaaga iyo inaad dardar geliso geeddi-socodka ilaalinta qiyaasaha ganacsiga ee Amazon.
Gaaban gaaban ayaa loo qoondeeyay siyaabaha sida aad u hagaajin karto ganacsigaaga iyadoo la adeegsanayo qalabka iibka amazon. Sidaa daraadeed, aan u eegno aragti cusub. Halkan waxaan ku jajabiyaa waxa ay u adeegaan, ma aha qasab in aan amar ku bixino.
Adeegyada Amazon ganacsi
Jungle Scout waa software isbarbardhexe ah oo u adeegta si ay kaaga caawiso helitaanka alaabta aad ka faa'iideysan karto ka. Waa macquul in la isticmaalo qalabkan marxaladda ugu horreysa ee ololaha aad ufaraxsan maaddaama ay yarayn karto waqtiga guesswork iyo baabi'inta khatarta ah in la bilaabo.
Waxaa jira laba ikhtiyaar oo ku saabsan sida aad u isticmaali karto barnaamijka Jungle Scout. Midka koowaad waa app app. Waxay kuu sahlaysaa inaad heshid suuq ganacsi oo faa'iido leh iyo walxo faa'iido leh oo ku yaal dhammaan liiska Amazon. Barnaamijka Jungle Scout wuxuu ku siinayaa fursad aad ku shaandheeysid xogta oo dhan qiimaha, iibka, iyo qaybta si aad u hesho liiska ugu habboon. Waxaa intaa dheer, adoo isticmaalaya qalabkani, waxaad la socon kartaa jagooyinka darajada tartanka iyo qiimaha. Isticmaalida qalabkan sida Extension Chrome, waxaad ka heli kartaa aragtida wax soo saarka ee deg deg kasta markaad eegto. Waxay ku siin doontaa qiimaha wax soo saarka kasta, booska darajada, tirinta dib u eegida iyo wixii ka sii badan ee isbarbardhigga alaabta.
AMZ Tracker waa qalab cilmi baaris oo bilaash ah oo loogu talagalay ganacsatada Amazon. Waxay ka caawisaa koritaanka darajooyinka iyadoo la adeegsanaayo dhiirigelinta, isugeynta riwaayad celinta iyo falanqaynta tartanka.
Si kastaba ha ahaatee, faa'idada aasaasiga ah ee barnaamijkani wuxuu ku siin karaa adiga oo ah cilmi-baaris ku-sheegid muhiim ah. Sida laga soo xigtay xogta website-ka ee shirkadda, AMZ Tracker waxay ahayd tii ugu horreysay ee loo yaqaano keyword keyword Amazon. Waxaa loola jeedaa in ay leedahay xog badan oo ka mid ah shuruudaha raadinta ee Amazon oo waxay ku qancin kartaa baahidaada yareeynta. Isticmaalida qalabkan, waxaad arki kartaa sida erayada muhiimka ah ee la xiriira alaabtaada kuxusan natiijooyinka raadinta Amazon.
Sida laga soo xigtay istaraatejiyadda difaaca AMZ, waxaad heli kartaa digniino diidmo mar kasta mar kasta oo macaamiishaadu ka baxaan wax ka yar 5-ta bilood. Waxay ku siinaysaa fursad aad si deg deg ah uga jawaabto si ay u xalliso dhibaatooyinkeeda ayna weydiiso inay kor u qaadaan qiimeynta. Adeeg kale oo waxtar leh AMZ Tracker waa digniin la afduubay. Adeegani wuxuu ku siinayaa digniin waqti kasta oo iibiyaasha kale ay isku dayaan inay afduubaan liiskaaga. Waad ku soo celin kartaa ka hor intaanay ururin xogta muhiimka ah ee alaabtaada.
Sidaas, qalabkan waa ka badan kaliya tracker ah sida ay ku siinaysaa aragti ah sida loo hagaajiyo liiskaaga wax soo saarka, hagaajinta liiska your product, iyo xitaa muuqan in Amazon Buy Box Source .